बुद्ध नाममा मात्र होइन, उनको उपदेशलार्इ व्यवहारमा पनि ल्याउन सिकौं - Everest Dainik - News from Nepal
बुद्ध नाममा मात्र होइन, उनको उपदेशलार्इ व्यवहारमा पनि ल्याउन सिकौं
नेपालमा मात्र नभर्इ विश्वभरि नै गौतम बुद्धका अनुयायीहरुले साेमबार बुद्धजयन्ती भव्यताका साथ मनाइरहेका छन् ।
हामी किन मनाउँछौं बुद्धजयन्ती ? के का लागि हामी बुद्धजयन्ती मनाउँछौं ? आखिर वास्तविक कुरा के हो ? यो देखावटीमात्र हो कि वास्तवमै हामी बुद्धको उपदेशलाई पछ्याउनकै लागि बुद्धजयन्ती मनाउने गर्छाैं त ? सत्यवादी, अहिंसावादी, दयालु भाव, कसैलाई घृणा नगर्ने, लोभलालचबाट टाढै रहने जस्ता उपदेशहरुमा हामी बुद्ध धर्मावलम्बीहरुले कतिसम्म पछ्याउन सकेका छौं त ?
गौतम बुद्ध भगवान् नभई हामी जस्तै आम व्यक्ति नै हुन् तर, उनले दरबार राजपाठ, सम्पत्ति, परिवार सबै कुरालाई त्यागी ज्ञान प्राप्तिका लागि हिंडेका थिए । तर, आजको युगमा बुद्धलाई मान्ने धेरै संख्यामा छन् तर उनको उपदेशलाई पछ्याएर जीवन सार्थक बनाउन सायदै कोही छैन होला । के यही हो बुद्धजयन्ती मनाउनुको अर्थ ।
आजको समयसम्म अाजको समयमा अाएर मानिसहरु अाफ्नो अघि बढ्नका लागि अधर्मको बाटोलार्इ अँगालिसकेका छन् । बुद्ध जयन्तीमात्र गैरशासकीय वर्गमा, बुद्ध र बुद्ध भूमिप्रति रूपान्तरित मनोअवस्था गहन आस्थाका रूपमा होइन, केवल आकर्षणका स्तरमा मनाउने गरेको पाइन्छन् ।
बौद्ध धर्मप्रति उनीहरूको त्यो आकर्षण र आस्था तत्कालीन परम्परावादी हिन्दु सनातनी शासकहरूले पचाउन सकेनन् । वर्षाबासकै अवस्थाबाट पक्राउ गरिए । सजाय स्वरुप देश निकालामा परे, सबै ।
याे पनि पढ्नुस महामारीविरुद्ध जुध्न बुद्धजयन्तीले थप प्रेरित गर्नेछः प्रधानमन्त्री ओली